Global Voices teny Malagasy » Mampiavaka an’i Japàna ve ilay toerana miringiringy natao ho fitaingenana bisikileta mitety valanjavaboary? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Desambra 2019 15:51 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika (fr) i Noelle Aboya-Chevanne, Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Hehy, Mediam-bahoaka, Tsidika
Raha mitady fahatazànana mila hanapaka aina ianao, ary tsy sarotim-panina, ilainao ny mandalo ao amin'ny “Sky Cycle” (bisikilety miety lanitra), ao amin'ny prefektioran'i Okayama, faritra voajanahary breziliàna Washuzan Highlands [tendrombohitra avon'i Washuzan] .
fitazanana avy any amin'ilay faritra natao hitaingenana bisikilety ao amin'ny valanjavaboary breziliàna Washuzan Highland  ao Okayama : pic.twitter.com/5JBIgCyUgd 
Washuzan dia any amin'ny tendro avaratra amin'ilay Tetezana Goavana Seto , fotodrafitrasa iray midadasika be mivelatra ao amin'ny ranomasina anatiny ao Japàna ary mampitohy ny nosy Honshu ao avaratra amin'ny nosy Shikoku ao atsimo. Tena zava-mampitolagaga amin'ny resaka injenieria ilay tetezana mirefy 13 kilaometatra eo ambony ranomasina.
Ny faritra mihataka ao Niigata, ohatra, tany aloha dia nampiantrano ny vohitra ara-kolontsaina tiorka Kashiwazaki . Tamin'izany fotoana izany ihany, ireo olona nitsidika an'i Nagasaki tany amin'ny tendrony andrefan'i Japàna dia afaka nitsidika valanjavaboary fisarihana iray feno ireo hàla-tàhaka mitovy habe amin'ny tena izy tamin'ireo tranoben'ny harembakoka holandey .
Mahazatra any Japàna ihany koa ny mamorona valanjavaboary fisarihana eny akaikin'ireo toeram-pahatsiarovana ao amin'ny firenena, toy ny Tetezana Gaovana ao Seto. Na ny Tendrombohitra Fuji aza dia manana ny vala, Fuji-Q Highland , azy manokana. Ao ireo tia zavatra mampiakatrakatra tosidra no afaka milalao amin'ireo fidinambe ao amin'ny Tendrombohitra Fiji sy mizaka ny herin'ny fisintonan'ny tany rehefa mitaingina ireo antsoina hoe “montagnes russes” ao amin'ilay valanjavaboary.
Na izany aza toa resin'ilay valanjavaboary breziliàna ao amin'ny prefektioran'i Okayama ny zavabita rehetra. Faritan'ireo japoney mpisera amin'ny aterineto ho tena hafahafa indrindra eto an-tany raha samy valanjavaboary .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/15/145859/
 prefektioran'i Okayama, faritra voajanahary breziliàna Washuzan Highlands [tendrombohitra avon'i Washuzan]: https://www.google.ca/maps/place/%E9%B7%B2%E7%BE%BD%E5%B1%B1%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF/@34.4019434,133.8041816,22112m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x3553e1ddb573b517:0xe2e1b3f46f33bf62
 Tetezana Goavana Seto: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Seto_Bridge
 noraisina hiasa any amin'ireo faritra indostrialy ao amin'ny manodidina.: http://books.google.ca/books?id=7nlxybOVae8C&pg=PT172&lpg=PT172&dq=okayama+brazil&source=bl&ots=_-PPBr199R&sig=XpjMRcAbGxXsd_eaYhVqVkdILfc&hl=en&sa=X&ei=Yy1sVLqKEcWyoQTLpYL4DQ&ved=0CCsQ6AEwAjgK#v=onepage&q=okayama%20brazil&f=false
 vohitra ara-kolontsaina tiorka Kashiwazaki: http://spikejapan.wordpress.com/2012/08/13/kashiwazaki-turkish-culture-village-and-the-psychology-of-nuclear-power/
 tranoben'ny harembakoka holandey: http://en.wikipedia.org/wiki/Huis_Ten_Bosch_(theme_park)
 tena hafahafa indrindra eto an-tany raha samy valanjavaboary: http://www.telegraph.co.uk/news/features/3637454/The-worlds-five-weirdest-theme-parks.html